Vietnamy - Wikipedia
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ((vi))
Repoblika Sôsialistan' i Vietnamy ((mg))
Teny filamatra : Độc lập, tự do, hạnh phúc
(Fahaleovantena, fahafahana, fahasambarana)
Teny ofisialy vietnamiana
Tanàna lehibe indrindra Hô-Chi-Minh-Ville
- Praiministra Repoblika
- Rano (%) faha 65
- Tontaliny (2012)
- hakitroka faha 14
91 519 289 mpo.
Anaran'ny mponina Vietnamiana, vietnamianina
Sandam-bola Đồng (VND)
Faritr'ora UTC +7
Hiram-pirenena Tiến Quân Ca
(Mandroso ny tafika)
I Vietnamy, na Repoblika Sôsialistan' i Vietnamy dia firenena ao Azia Atsimo-Andrefana ao atsinanan' ny Saikanosy Indôsinoa. Mirefy 341 690 km² ny velaran-taniny ary miisa 90,3 tapitrisa ny mponina tgao aminy tamin' ny taona 2012. I Vietnamy no firenena faha-13 be mponina indrindra eto ambonin' ny tany ary firenena aziatika fahavalo be mponina indrindra.
Ny firenena mizara sisintany aminy dia i Sina, i Laôsy ary i Kambôdia. Ny renivohiny dia i Hanoi ary ny tanàna lehibe indrindra dia i Hô-Chi-Minh-Ville. Atao hoe Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam izy amin' ny fiteny vietnamiana.
Manana halava mirefy 1 700 km, avy avaratra mianatsimo, sy sakany tsy mihoatra ny 300 km i Vietnamy. Be tendrobohitra sy be lembalemba, izay mahatratra 65 %n’ ny taniny ity firenena ity. Ny Ony Mena ao avaratra sy i Mekong ao atsimo no ony lehibe indrindra any. Toetanin-janapehin-tany ny toetany any.
Makitroka ny mponina any Vietnamy ary misy mponina 1 000 isaky ny km2 amin’ ny faritra amorontsiraka sasany. Betsaka ny tanora satria latsaky ny 15 taona ny 37 %n’ ny mponina. Ny 75 %n’ ny mponina dia monina an-tanàn-dehibe.
Mandroso ny toekaren’ i Vietnamy nefa tsy voatsinjara tsara eran’ny taniny izany. Ny fambolena no loharanon-karena lehibe indrindra any, indrindra ny fambolem-bary. Mandroso koa ny fanjonoana.
I Vietnamy dia ao amin' ny tapany atsinanan' ny Saikanosy Indôsinoa. Ny velarantany manontolon' ilay firenena dia 331 210 km² izay mitovitovy velarana amin' i Alemaina. Ny halavan' ny morontsiraka dia 3 444 km. Ny tendrombohotra avo indrindra ao Vietnamy dia i Phan Xi Păng izay manana haavo 3 143 m.
Nampalemy ny toekaren' i Vietnamy ny fandaniam-bola lehibe ho an' ny tafika sy ny fandaminana ny toekarena. Na dia izany aza, nitombo sahala amin' ny fitombon' ny toekaren' ny Sinoa ny toekaren' i Vietnamy taorian' ny nanesorana ny ankivy nataon' ny Amerikanina teo antenantenan' ny taona 1990. Nandritra ny taona 2000 dia tsy latsaky 4,7 % ny fitombon' ny PIB.
Ny PIB an' i Vietnamy dia 299,2 lavitrisa dolara ka manao azy ho firenena faha-43 lehibe indrindra ara-toekarena. Tamin' ny taona 2011, ny anjara toeran' ny fambolena ao amin' ny toekaren' i Vietnamy dia 48 %, ny sampan-draharaha dia 29,6 % ary ny indostria dia 22,4 %.
Mitombo isan-taona ny fizahàn-tany. 4,25 tapitrisa no isan' ireo mpizaha tany noraisin' i Vietnamy tamin' ny 2008.
Firenena niavian' ny mpizaha tany tonga tao Vietnamy
Firenena ao Azia:
Afganistàna - Arabia Saodita - Armenia - Azerbaijàna - Bangladesy - Bareina - Botàna - Broney - Emirata Arabo Mitambatra - Filipina - Iemena - India - Indônezia - Iràka - Iràna - Israely - Japàna - Jôrdania - Kambôdia - Katara - Kazakstàna - Kirgizistàna - Kôety - Kôrea Atsimo - Kôrea Avaratra - Laôsy - Libàna - Maldiva - Malezia - Mianmara - Môngôlia - Nepaly - Ômàna - Ozbekistàna - Pakistàna - Palestina (fanjakana) - Rosia - Sina - Singaporo - Siria - Srilanka - Tailandy - Taioàna - Tajikistàna - Torkia - Torkmenistàna - Vietnamy.
↑ kopian'ny arisiva. archived from the original on 2011-05-15 Retrieved on 2013-05-21.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnamy&oldid=1046120"
Dernière modification le 4 Jolay 2022, à 11:54
Voaova farany tamin'ny 4 Jolay 2022 amin'ny 11:54 ity pejy ity.